Ungayakha kanjani umugqa ophelele wesihlathi wentshebe yakho | Amadoda aSitayela
Ukubonisa intshebe ethandekayo kufanele uyigcine cishe nsuku zonke. Y enye yezindawo lapho kudingeka kunakwe kakhulu izihlathi.
Asinalutho olumelene nentshebe yemvelo, kepha akungabazeki ukuthi inciphisa intshebe ezihlathini inikeza ukubukeka okuhlanzekile Futhi, emehlweni abantu abaningi, ngokushesha uba mnandi. Izinyathelo ezilandelayo zizokukhombisa inqubo yokwakha nokugcina umugqa wakho wesihlathi:
Into ebaluleke kakhulu ukudweba umugqa wokucabanga esihlathini. Ukuze ukwenze kahle, uzodinga ukubeka amaphuzu amabili. Khomba A lapho ukuqabuka okusemaceleni kuqala ukunwebeka khona bese ukhomba u-B ngezansi, lapho intshebe ixhuma khona namadevu. Ngokujoyina u-A no-B, uzobona ngeso lengqondo ukuthi yimuphi umugqa wesihlathi ophelele wentshebe yakho. Ungakwazi ukujika umugqa ngangokunokwenzeka ngokuya ngofuzo lwakho noma okuthandayo (uma ufuna ukuthi kuphakame noma phansi). Ukuhlala ukhumbula njalo ukuthi kumayelana nokuthuthukisa ingxenye eminyene kakhulu nokuqeda izinwele ezikhululekile ezenza intshebe ibukeke ibudlabha futhi ingajwayelekile.
Lapho nje sesicacile ukuthi sizowubeka kuphi umkhawulo, sizoqhubeka nokwakha umugqa, ukususa zonke lezo zinwele ezisele ngaphezulu kwawo. Ukuze wenze lokhu, kunezindlela ezehlukene: umgundi kagesi, insingo yakudala noma ukuchusha. Le nketho yokugcina ikuvumela ukuthi ulondoloze umugqa ophelele wesihlathi isikhathi eside futhi ngaphandle kwesidingo sokuhlasela isikhumba ngamabhande, okusikhulula emiphumeleni emibi njengokucasuka. Yize kudinga umuntu onolwazi.
Shintsha inqubo yesondlo ibe sezingeni lokukhula kwakho. Kunoma ikuphi, khumbula ukuthi uma uvumela izinwele zikhule zibe zinde kakhulu, ulayini uzoyeka ukubonakala ucacile futhi kuzofanele uqale ekuqaleni ngesikhathi esizayo lapho uzochaza izihlathi zakho. Kungcono ukuyigcina okungenani kanye ngesonto..
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Izintshebe: Ungawuthola kanjani umugqa ophelele wesihlathi
Ukuza kwemfashini yamadoda ngezibuko ezinkulu